टुट्दै गरेको प्रेमलाइ कसरी बचाउने ?
यदि तपाईं आफ्नो पार्टनरलाई माया गर्नुहुन्छ, र दिमागमा आदरको भावना पनि राख्नुहुन्छ, तर त्यसो हुँदाहुदै पनि, सम्बन्ध टु’ट्ने अवस्था आउदैछ? टु’क्रिएको सम्बन्धलेले जीवनमा धेरै दुःख र पीडा ल्याउँछ। त्यसोभए केहि चीजहरूको बारेमा जानौं जसले तपाईंको सम्बन्ध बचाउन मद्दत गर्दछ।
असहमति वा नो’क’झो’क अक्सर सम्बन्धमा हुन्छ। तर परिवार वा साथीहरूको अगाडि सधैँ आफ्नो पार्टनरलाइ आफ्नो टिममा सोच्नुहोस्। अर्काको अगाडि पार्टनरको प्रशंसा गर्नुहोस, उसका राम्रा कुराहरुको बारेमा अरुलाई सुनाउनुहोस्। याद गर्नुहोस् कि तपाईंहरु दुबैले आफ्नो सम्बन्ध टु’ट्नबाट बचाउन पहल गर्नुपर्दछ। मानवबाट साह्रै धेरै अपेक्षाहरू हुनु गलत हो। सबैजानाले आफ्नो पार्टनरले एकै समयमा पति, प्रेमी, साथी र अभिभावकको भूमिका खेल्ने अपेक्षा गर्दछ। तर यो सोचाइ गलत छ। यदि पार्टनरले तपाईंको प्रत्येक आवश्यकता पूरा गर्न सक्षम छैन भने यसको मतलब यो होइन कि तपाईंको सम्बन्ध विनाशतिर बढिरहेको छ।
एक आपसमा बराबरी हैसियत हुनु वा सम्मान हुनु राम्रो हो। तर यससँगै सहानुभूतिशील हुनु पनि महत्त्वपूर्ण छ। मानौं कि दुबैजना साँझमा कामबाट थाकेर आएका छन्। तर यदि एकजना धेरै थाकेको छ भने अर्कोले घरको काम चलाउनमा कुनै समस्या महसुस गर्नु हुँदैन। प्रेम र आत्मीयता रोमान्टिक सम्बन्धमा धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्बन्ध जति पुरानो भएपनि पार्टनरको बाहिरी रूप र शरीरको खिल्ली नउडाउनुहोस्। तारिफ गर्ने गर्नुहोस। सम्बन्धमा रो’मान्स थपियो भने तपाईंहरु बीचमा प्रेम बृद्दि हुन्छ।
३) के तपाईंलाइ त्यस व्यक्तिको हरेक खराब र बचकाना व्यवहार पनि मन पर्छ र उसका गल्तीहरूलाई पनि प्रेम गर्नुहुन्छ? आफुले प्रेम गरेको मान्छेको बचपना पनि मन पर्छ। उसले गरेका गल्तिहरु पनि आफुलाई प्यारो लाग्छ। यदि तपाईंलाइ पनि त्यस्तो हुन्छ भने पक्का तपाइंलाई साँचो प्रेम भएको छ। ४) के तपाइँहरु बीच बहस भइ रहन्छ अनि अन्त्यमा सबै भुलेर सान्त हुनुहुन्छ? साँचो प्रेम गरेको मान्छे संग जति नोकझोक भएपनि केहीबेरमा सबै बिर्सिएर फेरी सामान्य हुनेगर्छ। प्रेम भएको सम्बन्धमा यस्ता मनमुटाव धेरै समय टिक्न सक्दैनन्। ५) के ऊ बाट केहि टाढा हुँदा तपाईं आफुलाई अधुरो महसुस गर्नु हुन्छ? चाहे तपाईं वरिपरी जतिसुकै मान्छे भएपनि तपाईंका नजर उसैलाई खोजि रहन्छन्? हो, साँचो प्रेम गरेको मान्छे संग केहीबेर टाढा हुँदा पनि बर्षौ बाट टाढा भए झैं महशुस हुन्छ। अनि कहिले ऊ संग नजिक हुने भनेर हतार भइ रहन्छ।
६) के ऊ दुखि हुँदा तपाइँ पनि दुखि हुनुहुन्छ? अनि तपाईं चाहानुहुन्छ कि जे गरेर भएपनि उसको दु:ख मेटाउन पाए हुन्थ्यो भनेर? ७) के तपाइंलाई आफ्नो प्रेममा पूर्ण भरोसा छ अनि तपाईलाई कुनै डर छैन कि, अब कुनै हालतमा ऊ टाढा हुन्छ भनेर? ८) के तपाईं उसलाई खुशी राख्नको लागि आफ्नो अरु महत्वपुर्ण कुरापनि छोड्न सक्ने तागत राख्नुहुन्छ ? ९) के तपाईं उसको आँफु संग जति झगडा भएपनि कसैले उसको बारेमा केहि नारामरो बोलेको तपाईं सुन्न सक्नुहुन्न ? १०) के अब तपाईं जे पनि गर्नुहुन्छ “हामि” भन्ने सोचेर गर्नुहुन्छ, के तपाइंले उसलाई पाएपछि “म” को भावना छोड्नु भएको छ ?
११) के तपाईंहरु कहिलेकाहिँ बाटोमा हिड्दा या अन्य ठाउँमा बस्दा हांसी मजाक गर्न थाल्नुहुन्छ अनि यो बिर्सनुहुन्छ कि तपाइँहरुलाई अरु मानिषले पनि देखि रहेका छन्? १२) के तपाइंलाई अब कहीं पनि एक्लै हिड्न मन लाग्दैन ? अनि एक्लै भएको बेला ऊ संग भएको भए भनेर आशा राख्नु हुन्छ? १३) के अब तपाईंका नजिकका मान्छेले पनि यो सोध्ने थालेकी, बिहे कहिले गर्छु भनेर? १४) के तपाइँ मनमनै यो सोच्नु हुन्छ कि, मैले मेरो पार्टनरको लागि सबै भन्दा राम्रो बन्नु पर्छ किनकि ऊ धेरै राम्रो डिजर्भ गर्छ भनेर यदि तपाइंलाई यी माथिका चिजहरु हुन्छन भने ढुक्क हुनुहोस्, तपाईलाई साँचो प्रेम भएको छ।